Transit Line Survey-Suzhou Sohologistics CO ။ , LTD ။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်လမ်းကြောင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပြီးအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လုံခြုံမှု၊ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်မှုအတွက်သော့ချက်မှာကြိုတင်လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကွဲပြားသောလမ်းကြောင်းများအားအမှန်တကယ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။
1. အတွေ့အကြုံနှင့်အညီအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကွာအဝေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာဖြစ်နိုင်ခြေကိုစဉ်းစားပါ။
၂။ အမှန်တကယ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများအားတိုင်းတာခြင်း (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှပြီးဆုံးသည်) ။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်တံတား၊ အမြင့်အတားအဆီး၊ ဆင်ခြေလျှောအတားအဆီး၊ အချင်းဝက်လှည့်ပတ်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအတားအဆီးများ၏အသေးစိတ်ပထဝီအနေအထားနှင့်အတားအဆီးအားလုံး၏အကျဉ်းချုပ်ကိုစုံစမ်းရန်လိုအပ်သည်။
3. အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများကိုအကျဉ်းချုပ်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းများ၏ကန ဦး သတ်မှတ်ချက်များအရသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သောအဓိကအတားအဆီးများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အညွှန်းအားလုံးကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိအဆီးအတားများကိုထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
အသေးစိတ်လေ့လာရေးလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ပါ။ ရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်း၏အနှစ်ချုပ်အချက်များအရအသေးစိတ်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်၍ အမှန်တကယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံကိန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလေးလံသောကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှု၏နိယာမကို အခြေခံ၍ အသေးစိတ်လမ်းကြောင်းကင်းထောက်၏နောက်အဆင့်ကိုဆောင်ရွက်ပါ။
၅။ အသေးစိတ်လေ့လာရေးလမ်းကြောင်းများကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ အဓိကအလုပ်မှာတံတား၏ ၀ န်ဆောင်မှုကန့်သတ်ချက်များကိုတွက်ချက်ခြင်း၊ အတားအဆီးအားလုံးကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားများနှင့်အတားအဆီးအားလုံးအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေခြင်း။
6.Road အတားအဆီးရှင်းလင်းရေးဘတ်ဂျက်။ ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားချက်အသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်၏ရလဒ်ပေါ် အခြေခံ၍ ရှင်းလင်းရေးကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဘတ်ဂျက်။
ဒေသန္တရအစိုးရ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရလိုအပ်လျှင်လိုအပ်ပါကသက်ဆိုင်ရာတတိယပါတီအဖွဲ့အစည်းမှလမ်းကင်းကင်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကို ဦး စွာအတည်ပြုပါ။